Madaxweynuhu lug kuma laha Is casilaadda - BBC Somali
Madaxweynuhu lug kuma laha Is casilaadda
Image caption Madaxweynaha Soomaaliya Shariif Shiikh Axmed
Madaxtooyada Soomaaliya hadal ka soo baxay ayaa sheegay in aan Madaxtooyadu wax lug ah ku lahayn is casilaadda Wasiirrada Qaranka.
Waxay Madaxtooyadu sheegtay in is casilaaddani ay ka timid Wasiirrada is casilay, isla markaana ay tahay mid dhex taalla Golaha Wasiirrada.
Warka ka soo baxay Madaxtooyada Soomaaliya waxaa uu muujiyay in aanu sax ahayn warka sheegaya in madaxweynuhu damacsan yahay in uu wiiqo Ra'iisal Wasaaraha.
Isla warkaa gudihiisa, Madaxweynuhu wuxuu ku taliyay in arrintan ay ka wada hadlaan mas'uuliyiinta ay khuseyso.
Warka Madaxtooyada waxaa lagu caddeeyay in uu jawaab u yahay hadallo la isla dhex marayay oo sheegayay in Madaxweynuhu ka dambeeyo is casilaadda.
Su'aalaha warkani dhaliyay
Hadalka ka soo baxay Madaxtooyadu waxaa uu abuurayaa su'aalo ka badan kuwa uu ka jawaabayo.
Waxaa la is weydiin karaa afar Wasiir oo is casilay maxaa ka dhigay arrin u taalla Golaha Wasiirrada oo xubnihiisu ay yihiin Wasiirro kale oo kuwa is casilaya ay isku darajo yihiin?
Su'aasha kale ee la is weydiin karaa waxay tahay waayo mas'uuliyiinta uu Madaxweynuhu sheegayo ee arrintani ay khuseyso, marka ay Wasiirrada is casilay eedeyntooda ay ka mid tahay in hoggaankii Qaranka iyo xukuumadduba ay fashilmeen?
Wasiirka Madaxtooyada, Xasan Macallin, wuxuu ahaa gacanyaraha Madaxweyne Shariif Shiikh Axmed, intii uu Madaxweynaha ahaa iyo intii uu tartanka ugu jiray intaba. Wuxuuna deggan yahay Villa Somalia, oo ah hoyga iyo xafiiska Madaxweynaha Soomaaliya.
Haddaba ma la dhihi karaa Xasan Macallin wuxuu isu casilay waxyaabaha ka dhacaya Golaha Wasiirrada dhexdooda?